Nhau - Nguruve nemazai zvinobhururuka chibage, iwo musika weamino acid unomira kudonha uye unotora
Kana kuburitswa kwesimba nyowani kuchisangana nehutachiona hutsva hwekorona uye kupihwa kwacho kuchidarika chinodikanwa, mumwedzi ichangopfuura, mamwe maamino acids akavira akadonha kubva pamusoro pegomo kusvika pasi pemupata, senge lysine, threonine, tryptophan, valine , nezvimwewo), apo chibage chakabikwa chave kufambira mberi munzira yese, zvichipenga zvichisimuka. Amino acid makambani akatambura maviri-mativi kurohwa kubva kumitengo nemitengo. Pamusoro peiyo yakanyanya tembiricha yekugadzirisa nguva, mwero wekushanda kwemafekitori wadzikira, uye huwandu hwevanogadzira vanomisa kupaura uye kukwidza mitengo hwawedzera. Kuberekesa mudzimba kwatangazve. Zvakanaka, musika weamino acid wakamira kudonha uye wakasimudzwa kupera kwemwedzi, uye kutenga uye kutengesa kwakavandudzwa. Parizvino, mutengo wemusika we98% lysine ndiRMB 7-7.5 / kg, mutengo wemethionine ndiRMB 18-19 / kg, mutengo we threonine ndiRMB 8-8.5 / kg, uye mutengo we tryptophan ndiRMB 43.5 -46 / kg.
Vagadziri vanomisa kugadzirwa uye vanotaura ruzivo nguva dzose
Makumi gumi anoteedzana maokisheni ezviyo zvenguva pfupi zvekuchengetera aona kutengeserana kwepamusoro uye maprimamisi epamusoro. Musika wechibage unopisa, pamwe nekuwedzera kweanopfuura zana yuan patani kubva kutanga kwemwedzi. Ikozvino mutengo wepakati pamusika we2275.26 yuan / ton yakakwira kusvika pakakwirira kwazvo mumakore mashanu apfuura. Kudya kwesoya kwakateverawo. Pakutanga kwemwedzi, yakakwira ne200-300 yuan / ton. Chibage ndicho chinhu chakasvibirira chekuvirisa amino acids senge lysine, threonine, uye tryptophan. Chibage chakadzika kugadzira makambani anoramba achiwedzera mutengo wekutenga, uye makambani ekudyisa akawedzera mari nekuda kwezvinhu zvakakura uye zvinotsiva. Kuwedzera kwemitengo kwakatangira pa50-100 yuan / ton. Iko kudiwa kwekuwedzera kweamino acid kugona gore rino hakuna kusimba, vatengesi vanotengesa zvinhu, vagadziri vanocheka mitengo yekusimudzira mashandisirwo, kugovera kushomeka kudzikisa kurasikirwa uye kurerutsa kumanikidza kwekuverenga.
Kuvandudza kudzoreredza kwekurima mudzimba
Iyo plamu inotumbuka kumaodzanyemba pakati-kusvika-kunopera Chikunguru, uye mafashama mamiriro akaderera pasi pakupera kwemwedzi. Mwedzi uno, hunyanzvi hwekurima huku yehuku hwakavandudzwa, huku nemazai zvakawedzera, uye mitengo yenguruve yakakwira. Kana iri Tailai, mazai akarasika kweinopfuura hafu yegore. Kupinda mudanho rekudzokorodza danho, mitengo yemazai yakakwira zvishoma nezvishoma muna Chikunguru, uye vatengesi vezai vakashandura kurasikirwa kuita purofiti. Zvinoenderana nekutariswa kwedata kweHuitong, kubva munaChikunguru 31, avhareji mutengo wemazai waive 8.05 yuan / kg, kuwedzera kwe70% kubva pakutanga kwemwedzi. Kubva kutanga kwegore rino, mafashama akonzeresa nhamo dzemamiriyoni makumi matatu neshanu nematatu mumatunhu makumi maviri nemanomwe (matunhu akazvimiririra nemadhorobha) anosanganisira Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, nezvimwe. yakakura, uye yepamusha yenguruve yekuverenga iri kuramba ichivandudza. Sekureva kweiyo 4000 yakatarwa-poindi yekutarisisa yeHurumende Yezvekurima uye Zvekumaruwa, masheya enguruve uye anodyara masowe mumhuri dzinoberekera akawedzera kwemwedzi mishanu yakateedzana.
Kupfupisa: kupa kunodzikira, kudhura, maitiro evagadziri pamitengo ari kuwedzera, uye hosha dzemumba dzinodzorwa nemazvo. Vamwe vaongorori vanoti mishonga yekudzivirira inogona kuwanikwa kuti ishandiswe munguva inotevera yechirimo, indasitiri yekupa zvekudya inovandudzwa, indasitiri yekuchengetwa kwemvura inodzoka zvishoma nezvishoma, uye mitengo yezvidya yesoya inokwira. Kufarira kudiwa kwemaamino acids, iwo musika wakamira kudonha uye kupora, uye musika wakadzikama uye wakaita zvine simba. Nekudaro, denda rekune dzimwe nyika richiri rakakomba, pamwe neanenge mazana maviri ezviuru achangobva kuongororwa mazuva ese. Pakati pavo, United States, Brazil, India, Russia, neSouth Africa zvakanyanyisa. Kudiwa kwekune dzimwe nyika kuchiri kushaya simba, uye makambani mazhinji epamba akazadza masheya avo, zvichitadzisa musika kuwedzera.
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm Giredhi, 73-32-5 L-Isoleucine, Kudya Kwemhuka, L-Threonine Chikafu cheGiredhi, Pharm Giredhi L-Leucine,